Huawei P30 Pro na-enweta ule ntachi obi JerryRig | Gam akporosis
Huawei P30 Pro na-enweta ule ntachi obi kachasị ama
Huawei P30 Pro bụ otu n'ime ekwentị nke oge a na gam akporo. Njedebe dị ike, nke na-apụ apụ karịa ihe niile maka igwefoto ya nke bu ihe kachasi ike na ya. Ọ bụ ezie na enwere akụkụ ndị ọzọ a ga-elebara anya na njedebe dị elu nke ụdị a. Nguzogide ya bụ akụkụ ọzọ dị mkpa. Ihe na-egosi na ndị kasị ama ule na ahịa.
Kemgbe Huawei P30 Pro a na-enweta ule nkwụsi ike kachasị ama na ahịa, nke sitere na JerryRigEverything. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na ezigbo echiche nke ahụ elu-elu hapụụrụ anyị na nkwupụta ya na-emezu. Ule nke Galaxy S10 nwetara n'oge na-adịbeghị anya.
Ule ndị emere na Huawei P30 Pro bụ nke a na-emebu. Ya mere, ị na-amalite site na ileba anya na ihuenyo ekwentị, na mgbakwunye na n'akụkụ na ese foto. Mgbe ahụ, a ga-anwa ịgba ihuenyo ahụ ma mesịa hụ na ọ na-agba mbọ gbagọọ ekwentị. Kedu ihe ga-eme njedebe a dị elu?
Nke mbu, etinyere ihuenyo di elu. Dị ka ọ dị na mbụ na nso a, a jirila iko kachasị eguzogide ọgwụ, ka anyị wee hụ na ọ na-eguzogide n'enweghị nsogbu na nke a. A kpuchidola igwe ese foto dị elu, na iko, ka ha ghara imebi ihe mmetụta ha. Ihe dị mkpa. Na okpokolo agba na bọtịnụ enwere igwe, nke a kpụchara akpụ karịa, mana ọ dị mkpa maka usoro ekwentị iji nwee nrụgide.
Ihuenyo ekwentị na-agbazi ọkụ, nke na-ewe ihe dịka 22 sekọnd iji gosipụta ụdị akara ọkụ. Dị ka ọ bụ ihuenyo AMOLED, ntụpọ na-anọgide na ihuenyo ahụ, nke na-agaghị ewepụ. Na njedebe, anyị gaba n'ogige atụrụ Huawei P30 Pro. Nnwale nke anyị na-ahụ na ekwentị anaghị ehulata n'oge ọ bụla, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe na-atụ egwu maka iguzosi ike n'ezi ihe ya.
Ya mere, anyị pụrụ ịhụ na Huawei P30 Pro a gafere JerryRigEnwale ntachi obi niile na ndetu. Ọ naghị ehulata ma ọ bụ na-agbaji n'oge ọ bụla. Na mgbakwunye, ika ama ama iji kpuchido ese foto nke ekwentị, nke bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya akụkụ dị mkpa na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei P30 Pro na-enweta ule ntachi obi kachasị ama
Nokia 9 Pureview na-enweta mmelite Eprel na nchekwa nchekwa na mmelite dị iche iche
Xiaomi ga - ebido igwe okwu eji eme ihe n’abia